Chineke Nna anyi, I kpugherela anyi ihe omimi nke okwu Gį site n’aka Jon di aso, onye Apostul. Site n’ekpere na n’ichighari ihe n’obi, mee ka anyi ghota amamihe nke Ọ kuzirile anyį. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …
Ihe Ogugu nke mbu: 1:1-4
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwo Jon nke mbu
Anyi na-edere unu banyere ihe ahu nke di site na mbido, nke anyi nurula, ma jirikwa anya anyi hu, lekwasa ya anya ma metukwa ya aka, o bu ihe gbasara okwu nke ndu. E mere ka ndu ahu puta ihe. Anyi huru ya ma na-agbakwa aka ebe. Anyi na-akoro unu maka ndu ebeebe, nke ya na Nna no na nke e mere ka o puta ihè n’ebe anyi no.
Ihe anyi hurula na nke anyi nukwara, ka anyi na akoro unu, ka unu soro anyi nwee mmeko, nke anyi na Nna na Nwa ya bu Jesu Kristi na-enwe. Anyi na-edere unu akwukwo ozi nke a, ka onu anyi zuo oke.
ABUOMA NA AZIZA: Ps: 97: 1-2, 5-6, 11-12.
Aziza: Nurianu n’Onyenweanyi unu bu ndi eziomume.
Onyenweanyi bu eze! Ka uwa ñuriba;
Nurianu, ala niile mmiri gbara gburugburu.
Urukpu na ochichiri gbara ya okirikiri;
o jiri eziomume na ikpe nkwumoto were too ntoala oche eze ya. Az./
Ugwu niile gbazere dika mmanu
n’ihu Onyenweanyi nke uwa niile.
Eluigwe na-ekwuputa eziomume ya,
mba niile na-ahukwa otito ya. Az./
Ihe na-achakwasi ndi na-akwuba aka ha oto,
anuri na-adiri ndi obi ha di ocha.
Nurianu n’Onyenweanyi unu bu ndi eziomume,
tookwanu aha ya di nso. Az./
Anyi etoo gi, Chineke, Anyi n’ekwuputa gi dika Onyenweanyi di otito, ndi umuazu na-aja gi mma. ALLELUIA.
Ihe ogugu ewetara na Ozioma di aso nke Jon dere:
O gbaara oso biakwute Saimon Pita na nwaazu ahu Jesu huru n’anya si ha, “Ha ebupula Onyenweanyi n’ili, anyi amaghikwa ebe ha dotere ya.” Pita na nwaazu nke ozo ahu wee puo gaa n’ili. Ha abuo jiri oso gaa, mana nwa azu nke ozo gbalahuru Pita n’oso wee buru ya uzo ruo n’ili. O hulatara, nyoo anya n’ime ili, hu akwa ahu ebe ha wusara n’ala, mana o baghi n’ime ili. Saimon Pita, onye na-eso ya n’azu biaruru, banye n’ime ili.
O huru akwaozu ahu ka o wusara n’ala, ya na jchafu nke e ji kechie ya isi. Ichafu a na akwaocha ahu adighi n’otu ebe, kama a piara ya apia dobe ya iche n’ebe ozo. Nwaazu ozo ahu, onye nke buru uzo biaruo n’ili, banyekwara n’ime ili ahu. O huru ma kwerekwa.
Dinwenų, gozie onyinye ndi a anyi na-ehunyere Gi. Mee ka anyi soro Jon di nso keta oke n’amamihe nzuzo nke okwu Gi di ebighi ebi nke I na-ekpughe n’emume nke Eucharistia nke a. Anyi na-ario Gi ihe ndja site na Kristi Dinwenų anyį. Amen.
Nna ji ike niile, Jon di nso kwuputara na okwu Gi bjara were ahu maka nzoputa anyį. Site na Eucharistia nke a, mee ka Nwa Gį biri n’ime anyi mgbe niile n’ihina O bu Dinwenu ebighi ebi, ebighi ebi. Amen.
Igbo Mass Readings for December 28 2021, Ncheta Holy Innocents